Sida Cunnooyinka Taayirada Garaacayaasha ay ula dagaalamaan kalinimada
Sidee Cunnada Wheels tabaruceyaashu ula dagaallamaan kalinimada
Iyadoo aan lagu guuldareysan waqtiga qadada, Bonnie waxay ku jirtaa hoolka gurigeeda ku yaal Minneapolis iyada oo sugeysa, kuna soo dhaweyneysa mutadawiciinta u adeegaya cuntada maalintii iyada iyo deriskeeda. Si dhakhso leh u dhoola cadeynaya markay tabaruceyaashu soo galaan, waxay ku siin doontaa fikradeeda habka ugu wanaagsan ee cunnada maalintii loogu geyn karo deriskeeda sare.
Maalmaha ay tabaruceyaashu haystaan bac dheeraad ah oo loo isticmaalo in lagu gaarsiiyo toddobaad qiimihiisu yahay cuntada barafaysan qof kale oo deggan, Bonnie waxay soo bandhigi doontaa inay bacda ku haysato aqalkeeda. Habkaas uma baahna inay qaadaan boorsada maran inta ay u geyn doonaan dadka deggan dabaqyada dhaadheer.
"Waxaan mutadawiciinta ku leenahay mahadnaq gaar ah iyagoo doonaya inay adeegaan," ayay tiri sababta ay u jeceshahay inay ku soo dhaweyso maalin kasta.
Bonnie ayaa sheegtay in cunnooyinka ay hesho maalin kasta ay muhiim u yihiin ka caawinta cunnadeeda caafimaad iyo inay si madax-bannaan u noolaato. Waxay kaloo sheegtay in dareenka bulshada ay ka hesho ka mid ahaanshaha barnaamijka ay bixiso faa iidooyin aan la beddeli karin.
Maxaa kelinimada loola dagaallamayaa, gaajada ka sakow, arrimaha
Bonnie kali kuma ahan sida ay u dareemeyso barnaamijka. Daraasad qaran oo dhowaan lagu sameeyay barnaamijka Cunnada Lugaha ee Jaamacadda Brown ayaa lagu ogaaday Boqolkiiba 77 dadka maalin walba qaata, cuntada kulul ee Meals on Wheels ayaa sheegay inay ka caawisay iyaga inay dareemaan cidlo yaraan.
Daraasaddaas ayaa sidoo kale lagu ogaaday in dadka qaata ee keligood noolaa ay uga badan tahay kuwa kale inay soo sheegaan in cunnada maalin kasta la gaarsiiyo ay ka caawisay inay dareemaan inay xiriir la leeyihiin bulshada. Markaan sii gabowno, waxay u badan tahay inaan kaligeen noolaano. Dalka Mareykanka, seddex meelood meel dadka qaangaarka ah ee ka weyn da'da 65 ayaa hadda keligood nool, sidoo kale kala bar dadka da'doodu ka weyn tahay 85 sano.
Deegaan ahaan, ku dhowaad saddexdii meeloodba afar qaatayaasha aan u adeegno (boqolkiiba 74) ayaa keligood nool. Dad badan oo aan u adeegno waxay la kulmayaan caqabado dhaqdhaqaaq oo ka hor istaagi kara inay noqdaan kuwo firfircoon sida ay rabaan, tabaruceyaasha cuntada keenaya waxay bixin karaan wargelin bulsheed oo aad loo qiimeeyo.
Kordhinta cilmi baarista waxay soo jeedineysaa kalinimadu kaliya ma saameyneyso xaaladdeena maskaxeed, laakiin caafimaadkeena jir ahaaneed. Go'doominta bulshada waxay la xiriiri kartaa dhibaatooyin caafimaad oo ballaaran oo ka imanaya halista sii kordheysa ee cudurka wadnaha illaa hoos u dhaca garashada garashada, ayaa lagu xusay Dr. Dhruv Khullar oo faallo 2016 ka bixinaya New York Times.
'Marka dadku wax dhaawacayaan waxaan isku dayaa inaan ka caawiyo sida ugu fiican ee aan awoodo.'
Marka Bonnie ay kula sheekeysaneyso deriskeeda aqalkeeda, ma xishooto sida Cunnooyinka Lugaha looga caawiyo. Ka dib markii ay ku qaadatay xirfaddeeda kalkaalinta caafimaad, waxay sheegtay in dabeecaddeeda ay tahay in la isku dayo in la caawiyo dadka xitaa marka caawimaad la weydiisto ay adkaan karto.
"Wax badan ayaan iskaa wax u qabso ku qabtaa dhismaha halkan waxaanan la kulmaa dad ka faa'iideysan doona," ayay tiri. "Marka dadku waxyeelloobayaan waxaan isku dayaa inaan iyaga sida ugu fiican ee karaankooda ah u caawiyo."
Bonnie iyo ilaa dersin deriskeeda ah, Tabaruceyaasha Cunnada ee Wheels ma keenaan oo keliya nafaqada cuntada diiran, laakiin wadahadal saaxiibtinimo sidoo kale. Cilmi baarista ku saabsan cawaaqib xumada caafimaad ee kalinimada waxay soo jeedineysaa in dhanka bulshada ee gaarsiinta cuntada ay ka ciyaari karto door muhiim ah sida cuntada.
Ma rabtaa inaad ku biirto dagaalka ka dhanka ah kalinimada, Saxiix iskaa wax u qabso Cunnada Wheels maanta!
Febraayo 8, 2019